Homeसमाचारसांसद नबिना लामा बनिन् आमा ! तस्बिर सेयर गर्दै यस्तो लेखिन्..
August 27, 2020 admin समाचार 13582
सांस’द नबिना लामा आमा बनेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवु’कमा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै त्यसको जान’कारी दिएकी छन् । उनले छोरालाई जन्मदिएकी छन् । उनी तत्कालिन अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष समेत रहेकी लामा प्रतिनिधि’सभामा सदस्य समेत हुन् ।
उनको दुई वर्ष अघि विवाह भएको थियो । नविनाले आफ्नो १२ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्ध’लाई दुई वर्ष अघि भब्य विवाह गरेकी थिइन्। उनको विवाहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगाय’तका तत्कालिन एमा’लेका नेता’हरु पुगेका थिए ।
अनेरास्ववि’युका पूर्व केन्द्रीय सदस्य प्रविन श्रेष्ठसँग उनको विवाह भएको हो । हेी समय अघि उनीहरुले गर्भववती अवस्थाका तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेका थिए । गर्भव’ती भएपछि सार्व’जनिक कार्यक्रममा कम देखिए’की लामाले अब केही समय परिवार र बच्चाका लागि छुट्याउने बताएकी थिइन् ।
बच्चा’को पालन पोषणमा कुनै कसर बाँकी नराख्न आफुले केही समय लिने उनको भनाई थियो । उनले केही बेर अघि सा’वएजनिक गरेको बच्चा सहित’को तस्बिरमा निकै धेरै बधाईका सन्देश आएको छ । उनले छोरोको तस्बिर सार्वज’निक गर्दै यो सुन्दर संसारमा हाम्रो सन्ता’नलाई स्वागत छ भन्दै स्टाटस लेखेकी छन् । – ताजा खबर
दिलिप रायमाझी र रमित ढुंगानाको नेतृत्वमा भुटानी शरणार्थी शिविरमा राहत वित’रण
May 22, 2021 admin समाचार 3120
मोरङ जिल्ला’को पथ्री–शनिश्चरेमा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविरमा नायकद्धय दिलिप रायमाझी र रमित ढुंगा’नाको नेतृत्वमा राहत वितरण गरिएको छ । ‘इन्ट्रा–नेशनल वेलफे’यर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेशन अफ अमेरिका’को अग्रसरतामा शरणार्थी शिविरमा राहत वि’तरण गरिएको हो । नेपालबाट
October 1, 2020 admin समाचार 9692
January 22, 2021 admin समाचार 7447
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (218853)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (210513)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (210203)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (208995)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (207781)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (206928)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (205395)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (205160)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (174097)